BOODHKA JILICSAN EE DABOOLKA: SHARAXAADDA IYO QAABABKA HALGANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Sidee ula macaamilaa boodada jajabka on dabocase
Mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarta badan dabocase la yidhaahdo boodada jilicsan. Waxay ku nool yihiin meel kasta, sidaas darteed ninkii beerta oo idil wuu la kulmi karaa.
Aan aragno waxa ay cayayaankaasi ku sameyn karaan dabocase iyo waxa ay yihiin siyaabaha looga hortago.
Boodhka jilicsan wuxuu leeyahay cabbir aad u yar - oo aan ka badnayn 3 mm. Inta badan, bannaanka u ma fiiro iyaga, sababtoo ah cayayaanka waa yar yahay in ay la jaanqaadaan dhulka. Midabka madow wuxuu ka caawiyaa inay ku sii sugnaadaan, laakiin noocyada kala duwan ee boodada waxay leeyihiin jilib jilicsan dhabarkooda. Booguhu way toosan yihiin xilliga jiilaalka sida ugu dhakhsaha badan. Dadka waaweyn ee guga waxay cunaan inta badan cawska (roodhiga duurjoogta ah, dhiiqada beeraha, kufsiga iyo kuwa kale), ka dibna boodada madow ee dabocase iyo dhirta kale ee jilicsan.
Ma taqaanaa? Magaca boodada ayaa ka helay qoyska dhirta oo ay jecel yihiin in ay cunaan - iskutallaabta.
Dirxiga cayayaanka cunaa badi ahaan xididada iyo xididdada dhirta laga beero. Ka dib markii laga beddelay nabraha si boogta oo buuxa, cayayaanka ayaa ku yimaada dusha sare waxayna waxyeeleysaa caleemaha iyo koritaanka.
Cawaaqibka macquulka ah
Si ay u raaxaysato, waxay aad u halis ah - waxay cunaan caleemo khafiif ah oo caleemo leh si ay godadka, ka dib markii ay ka qalalaan. Qaar badan oo ka mid ah kuwa lamid ah ayaa burburin kara dabocase dhan ee beerta 2-3 maalmood: cayayaanka qaangaarka ah ayaa cuni doona caleemaha oo cunaan maqaarka cawska, halka dirxiga uu burburin doono xididdada geedka. Waa lagama maarmaan in loola dagaallamo boodada jilicsan ee dabocodta isla markiiba ka dib markaad ku aragto, iyo xitaa ka wanaagsan inaad sameyso kahortagga inta lagu jiro beerashada.
Ma taqaanaa? Roobkii ugu weynaa waxaa kordhay beeraley reer Isbaanish ah ee Nissan Tamir. Waxay miisaankeedu ahaa 10 kg waxaana lagu qoray liiska Guinness Records.
Calaamadaha qaxwaha jilicsan on dabocase
Calaamadaha ugu muhiimsan ee infekshanka dabka qaboojiyaha waxaa ka mid ah:
joogitaanka dhirta cayayaanka yaryar ee ka soo baxa jihooyinka oo dhan, haddii aad dhibto caleen;
caleemaha geedka waa dhuuban iyo qalfoof;
joogitaanka godadka caleemaha;
macdanta caleenta (caleen ayaa lagu dhex jaray caleemaha).
Haddii ugu yaraan mid ka mid ah calaamadahaas la ogaado, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo dabocodka, taasoo ka hortagi karta geerida dhirta.
Iyada oo cayayaankaasi ay ku dhibtoonayaan labadaba kiimikada iyo daaweynta dadka. Haddii mulkiilaha goobta uu ku yaryahay dalka, markaa waxa u fududaanaya inuu isticmaalo macdanta kiimikada si uu ula dagaallamo boodada.
Laakiin bannaanka u ah oo si joogto ah on goobta, ku guulaysan kartaa cayayaanka iyo daaweynta dad.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u barato dhibaatooyinka marka ay koraan dabocase, ku saabsan dagaalka lagula jiro cudurrada iyo cayayaanka iyo ku saabsan guryaha faa'iidada leh.
Ka takhalus boodada dabocase, waxaad ku caawin kartaa qalabka sida qallal joogto ah. Baaldi biyo ah waxaad u baahan tahay in aad qallajiso dhalo oo khal qashin ah iyo geeddi-socodka dhaqanka ay saameeyeen cimilada qalalan. Caawin wanaagsan ee dagaalka ka dhanka ah tincture cayayaanka ee 500 g oo ah xididdada iyo caleemo of løvetann iyo baaldi biyo ah.
Waa muhiim! Dabocase - dhaqanka Bisaylkiisa hore. Haddii aan loo baahnayn, ha isticmaalin kiimikooyinka, maadaama ay ku ururi karaan geedka.
Waxa kale oo ku habboon inaad ku buufisid decoction of yaanyo ama dhalooyinka baradho, kaas oo laga heli karaa by dhirta duurka. Maraqkan waxaad u baahan tahay inaad ku darto nus kale oo ah saabuun suuf ah. Qadar weyn (2-4 kg) yaanyo cusub ama qallalan ama baradhada barafka waa in lagu qooyay afar saacadood 10 litir oo biyo ah, ka dibna la kariyey, la qaboojiyey oo la sifeeyey. Kadibna marinka ku walaaqi biyo 1: 1.
Haddii uu jiro dib udajir dheeraad ah, ma ku daadin kartid, laakiin ku hay illaa iyo xilli xiga, adigoo xiran daboolka.
Well waxay ka caawisaa ciidda budada, taas oo koraa radishes, ash alwaax, mothballs ama boodhka tubaako. Budadaas waxay noqon doontaa difaac fiican oo ka soo horjeeda boodada iyo bacriminta waxtar leh isla waqtigaas. Nidaamku wuxuu noqonayaa mid waxtar leh haddii la sameeyo 4-5 cisho ugu yaraan saddex jeer.
Ku daboolida dabocase waxaa lagu kabi karaa dhowr daawo oo kale. Dusha sare ee warshadda ayaa la rusheeyaa subaxii hore marka laga soo saaro dhoobada oo leh basbaaska dhulka madow ama lime lakin. Beerta khibrad leh waxay la imaanaysaa dabinno cayayaan kala duwan. Badanaa waxaa jira sariiro gaar ah oo sariiraha ka mid ah, oo hoosta ka mid ah oo lagu dhajiyo wax xoqan (tar, dufan, tar). Dhowr maalmood ka dib, boodada ayaa ku dabooli doonta dabinka waxayna u baahan doontaa in la beddelo mid cusub.
Waa muhiim! Inta lagu jiro caruurnimada dabocase leh mootooyinka, maskooyinka difaaca waa in la isticmaalaa, maaddaama uumiyayaashu ay halis u yihiin caafimaadka bini'aadamka.
Gawaarida si ay ula dagaallamaan cayayaanka waxay isticmaali karaan maro maro lagu rusheeyey saliidda qubeyska hore. Maro maro ah oo la dhigo xaashida kartoonada inta u dhaxeysa sariiraha dabocase 2-3 maalmood. Ka dib marka ay u baahdaan in ay u jeedaan dhinac kale oo ka tagaan isla mudadaas. Kabaha lagu dhajiyay meel fogaan ah 4 mitir midba midka kale.
Ka hor inta aan la daboolin dabocase leh cayayaanka ka soo boodada, waxaa habboon in la isku dayayo in ay la dagaallamaan hab dabiici ah. Haddii aysan ku caawin, waxaad sii wadi kartaa isticmaalka mukhaadaraadka khaaska ah.
Kiimikooyinka xakamaynta cayayaanka ugu waxtarka badan waa:
Beeralayda u muuqda waxay ogaadeen in shaambada shaambo ee eeyaha ay sidoo kale shaqo fiican u tahay la dagaallanka cayayaanka. 1-2 xirmooyinka shaamboo waxay u baahan yihiin in la barbardhigo baaldi biyo ah iyo buufin dhirta.
Waa muhiim! Insecticides waxaa loo isticmaalaa oo kaliya on dabocase ah ee noocyo dhexdhexaad ah (waxay ku qumman 25 maalmood) oo kaliya halka geedo yihiin dhalinyaro. Haddii kale, waxaa jira xoogaa sarreeya ee luminta dalagga.
Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo baahida daroogada loo baahan yahay, taas oo had iyo jeer lagu qoro baakidhka iyo walxaha oo dhan way kala duwan yihiin. Tusaale ahaan, 20 ml ah Actellic waa in lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah. Haddii aad isticmaasho "Karate", waxay noqon doontaa mid ku filan oo 2.5 ml oo isku mid ah biyaha. Ka hor inta aan la daaweyn dhammaan caleemaha, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hubiyo daawada hal warshad. Markaa waxaad u baahan tahay inaad daawato maalinta dabaysha oo la waraabiyo iyo, haddii xaaladdeedu aysan ka sii darin, waxaad sii wadi kartaa inaad ku dhaqaaqdo dhaqanka. Kiimikada la buufiyo sida caadiga ah fiidkii, marka qorraxdu mar hore hoos u dhacdo.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad wax ka ogaatid cayayaanka dhirta sida boodhadhka, qashinka, caarada caarada, caarada, xayawaanka, barafka, boodboodka, ilaaliyaha beenta ah.
Waa waqtigan maalintiiba in boodada jilicsan ee xaalad degan ay ku fadhido caleemaha dabocase. Waxaa lagugula talinayaa in aad aragto saadaasha cimilada habeenkii iyo maalinta xigta si loo hubiyo in ay jiri doonto cimilo qalalan. Haddii roobabku wali socdo, waxaad u baahan tahay inaad ku celcelisid falanqaynta.
Waa muhiim inaad xusuusatid inaad ilaaliso dhammaan xeerarka amniga inta lagu jiro daaweynta dhirta kiimikooyinka, si aan shaki uga dhigin naftaada iyo inaadan helin gubashooyin kiimiko ah. Waa suurtogal in la ururiyo oo cuno radishes, kuwaas oo la soo baaraandegay, kaliya bil ka dib laga bilaabo maalinta la buufiyo.
Muuqaalka muuqaalka kalluunka qallalan ee roodhida waa sahlan tahay in laga hortago marka la isku dayo in loola dagaallamo awooddaada oo dhan. Boodada qallalan waxay ka cabsantahay noocyo kala duwan oo ur ah. Si looga hortago muuqaalka cayayaanka, radishes waa in ay ku wareegsan yihiin dhirta sida:
Si aad u feejignaato dareenka dabocase, waxaad aadi kartaa tallaabo khatar ah oo dhirta dusheeda lehna cayayaanka qulqulaya ee wareega goobaha leh dalagga. Si kastaba ha noqotee, bannaanka ugu, badiyaa, waxay ku talinayaan in ay si xun ula macaamilaan haramaha ka soo baxaya qulqulka. Si looga hortago weerarka boodada ratika, waxaa suurtagal ah in dib loo dhigo beertiisa waqti hore, marka boodbadu weli aan soo kicin, ama waqti danbe, marka aanay sii wadi karin waxyeelo xooggan.
Ma taqaanaa? Radish waxa ku jira wax badan oo ascorbic acid ah. Markuu cuno 250 garaam oo raajo ah, waxaad ku siin kartaa jidhka maalin kasta oo ah fitamiin C
Dufcadaha ma jecla meelaha qoyan, sidaa darteed radishes waa in la dhigo iyaga. Xilliga dayrta, dhammaan ciidda beerta waxay u baahan tahay in la qodo. Sidaa daraadeed, boodboodaha dhulka u qaboobey xilliga jiilaalka, waxay noqon doonaan dusha sare waxayna u dhintaan inta lagu jiro barafka. Waa muhiim in la quudiyo dabocase, si joogta ah biyo iyo dabacsan dhulkii uu korayo. Sidaa daraadeed horumarkeeda ayaa si dhakhso ah u socon doonta, caleemuhu waxay noqon doonaan kuwo aad u adag, iyo boodhku ma heli doono wakhti ay keenaan khatarta weyn ee khatarta ah.
Waxaad isku dayi kartaa inaad daboolatid roodhiga leh lafdhabarka ama lutrasil, si sahlan u daa hawada, iftiinka iyo biyaha, iyo sidoo kale difaaca geedaha yar yar ee weerarada cayayaanka.
Boodhka jilicsan - cayayaan aad u khatar ah oo loogu talagalay daboolka yar yar. Laakiin marka la baro inay ka hortagaan dhacdooyinkooda oo ay la dagaallamaan, waad iska ilaalin kartaa dhimashada geedka.